Wednesday January 01, 2020 - 14:09:45 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Wasiir Sacad u ku haftay daynta Somalia by Amir Bidde Wasiirka maaliyadda Somaliland oo xaflad ururada dhallinyarada Somaliland ka qayb galay ayaa ku qudbadeeyey waxaan looga fadhiyin, xidhiidhna aan la lahayn ujeedada xafladdan la iskugu yimid.
Sacad Cali Shire wuxuu ka hadlay daynta Somalia lagu leeyahay ee ay Somalia naawilayso in laga cafiyo. Sacad wuxuu daynta u sharraxay sidii u yahay macalin dhex taagan fasal oo ardayda u sharraxaya dayn macnaheeda iyo dariiqa loo maro cafiska. Wuxuu kaluu sheegay waxyaabihii lagu qaatay dayntaa, oo ay ka mid tahay lacagtii ku baxday dagaaladii 1977 iyo kuwii 1980's.
Labadan dagaal uu sheegay Sacad ee daynta badan lagu galay ee uu ka gaabsaday inuu faahfaahiyo, maxay yihiin?
Ka hore waa 1977kii waa dagaalkii garadarrada ahaa ee dalka Itoobiya lagu qaaday. Iyadoo rajiimkii Somalia ee waqtigaa looga digay inuu galo dagaalkaa. Oo quwadihii waqtigaa oo ahaa Ruush iyo Maraykan labaduba uga digeen cawaaqib xumada Somalia uga iman doonta dagaalkaa. Hase yeeshee arrimaha gudaha oo murgan awgeed, sheekadii shuuciyadda iyo Ilaahdiidka oo fashilantay, dhaqaale xumo, gaajo oo kilooga sonkarta ah kuyuu loo galo. Ayuu si uu shacabka cadow kale ugu sameeyo, Siyaad Barre, si indho la'aan ah u galay dagaalkaa.
Dhulka la weeraray ee noqday goob dagaal waa dhulkii Soomaalida Itoobiya deggenaayeen. Dadka Soomaalida ah ayaa ku le'day dagaalka. Hantitoodii lagu baabiiyey. In ka badan hal milyan oo qofna la bara kiciyey oo qaxooti ku noqdeen Somalia, Kenya iyo Djibouti. Dagaalku marnaba ma dhaafin xuduudda dhulka Soomaalida. Dadka aan Somali ahayna wax saamayn ah kuma yeelan dagaalku. Jabkii Somalia ka soo gaadhayna waa ka aakhirkii keenay in jabhado la samaysto iyo dhiciddii Barre iyo burburkii Somalia.
Dagaalka 2aad 1980's ee daynta lagu galay waa kii dawladda Somalia ku soo qaadday Somaliland. Dagaalkan oo ka khasaare badnaa naf iyo maalba kii hore. Dagaalkan waxa ku dhintay in ka badan boqol iyo konton kun oo shicib ah. Waxa lagu baabiiyey oo dhulka lala simay magaalooyinka Somaliland. Dhammaan waxay dadku hanti lahaayeena waa la baabiyey, wax la gubay iyo wax la bililaqaystay. Maatidiina waa la baro kiciyey oo iyagoo tabaalaysan dalkoodi ka qaxay oo Itoobiya magan u noqday.
Sacad uma hadal sidii qof siyaasi ah ama wasiir Somaliland metelaya. Wuxuu u hadlay sidii aqoon-yahan dhaqaale oon xil qaran saarrayn. Oo aqoontiisa dhaqaale inuu dadka u muujiyo jeclaystay.
Wuxuu sheegay in daynta xataa innaga la innagu leeyahay, illayn isku dal baynu ahayne!!
Wasiirku wuxuu illoobay in marka laba dal ku heshiiyaan inay kala baxaan, oo is aqoonsan rabaan; markaa ay tahay marka laga heshiiyo wixii dayn la lahaa, wixii hanti la wada lahaa iyo wixii mag-dhow ah ee la isa siinayo. Maanta oo Muqdisho diiddan tahay jiritaankeena, dagaal dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ba'anna innagu haysa maaha inuu dayn qirto. Dayn, kaaga darane, la soo siistay rasaastii iyo madaafiicdii shicibkaaga lagu xasuuqayay.
Sacad wuxuu sheegay inaan Somaliland wax mowqif ah ka qaadan cafinta daynta laakiin wuxuu si badheedh ah u qirtay in xabaddii lagu dilay walaalaheen iyo waalidkeen lacagteedii la innagu leeyahay. Qirashadan oo uuna cidna (sida golayaasha) kala tashan.
Marna qalbigiisa kuma soo dhicin inuu hadalkiisu damqaayo
victims-kii dagaalkaa (iyo dadka dadkoodii xabaalo wadareedka ku jiraan) oo ah 90% dadka Somaliland.